ROSE "WILLIAM MORRIS": SHARAXAAD SOO NOQNOQDA BEERTA, BEERASHADA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Kordhinta Ingiriisiga Guul "William Morris"
Marka beeralayda ubaxu ay u maleynayaan - waxay yiraahdaan, iyo inaanan nadiifinaynin William-na - waxay isla markiiba leeyihiin cillad. Loogu talagalay Ingiriis caanka ah David Austin wuxuu keenay laba nooc oo isku mid ah, oo mid ka mid ah lagu magacaabo William Shakespeare, iyo kan kale - William kale, laakiin Morris. Kuwa ka door bidaya dambe, aan lumay, sababtoo ah waa mid aad u cajiib leh, wuxuu leeyahay tiro fara badan oo aan la dafiri karin.
Beerka David Austin, oo ku takhasusay kobcinta noocyo cusub oo shub ah, taas oo horseedday noocyo Ingiriisi hore ah, waxay la kulmi lahayd shuruudo casri ah, 1998-kii waxay heshay nooca warshad. Wuxuu magaciisa u yaqaanay gabayada caanka ah ee Ingiriisiga, farshaxanka iyo naqshadihii qarnigii XIX, William (William) Morris.
Oo riyadii waan soo qaaday oo waan arkay. Buundo awood leh, oo gaadho qiyaas ahaan hal iyo badh, ama xitaa laba mitir, oo leh laamiyo faafin, caleemo dhaadheer iyo ubaxyo qurux badan ayaa awood u leh in ay ku noolaadaan meel madax bannaan oo beerta ubaxa ah.
Ma taqaanaa? Saliida Rose waxay ka qaalisan tahay platinum iyo dahab. Si loo soo saaro hal litir oo saliid ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado saddex ton oo tafaariiq ah.
Sidaa darteed, waxaa sida caadiga ah lagu beeray asalka ama meel u dhow rugta beerta ama gawaarida. Burburka si dhakhso ah u koraa, jiilaalka-adag, adkaysi u cudurada, si fiican u adkeysan roobab muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, si aaney u jilicsanayn gustsada dabaysha, waxay u baahan tahay lafdhabarka laanta.
Noocyo Rose ah "Graham Thomas", "Mary Rose", "William Shakespeare", "Benjamin Britten" iyo "Falstaff" ayaa sidoo kale waxaa loola tacaalayay tarbuunka Ingiriisiga caanka ah David Austin.
Khayraadka ugu weyn ee geedka this, dabcan, ubax. Waxay yihiin kuwo waaweyn - qiyaastii 10 cm dhexroor, waxay ka kooban yihiin tufaaxyo badan, tiradaas oo ka badan afartan celcelis ahaan celcelis ah, waxayna gaari kartaa boqolaal qaybood.
Petals ee xarunta dhexe ee ubaxa ah nidaam midab khafiif ah-casaan, taas oo u tagaan gees u dhow caddaan. Ubaxa wuxuu dhadhamiyaa ari adag oo aad ufiican, taas oo ay ku badan tahay qoraallada urta shaaha. Connoisseurs waxay yiraahdaan, kala duwanaanshahan, kuwa ingiriisiga kale, waxay udambeysay ubaxyada ugu fiican.
Waxaad ku beeri kartaa geedka guga, ka hor inta uusan ubbooyinku bilaabaan inay Bloom, ama dayrta, ka dib dhamaadka ubax.
Goobta waa in la doortaa sida habka qorraxda qorraxdu ugu dhajiso dhirta ugu badnaan shan saacadood maalintii, maadaama tani uusoo kordhinayso in badan oo qorraxdu jirto.
Beeraha waa lagama maarmaan in la qodo godka nuska mitir dhererka, ballaca iyo dhererka.
A beerta beerta yar oo bacrin ah waa in lagu qasi karaa marka loo siman yahay humus iyo ku shubay god, ka dibna ku shub baaldi biyo ah halkaas oo sug ilaa ugu yaraan labaatan saacadood.
Isla markiiba ka hor beerto waxay faa'iido u tahay in la gooyo xididdada yaryar ee xalka si kicinaysa koritaanka.
Waa lagama maarmaan in la baadho baadiyaha habkaas oo kale, marka hore, xididdada waxaa lagu dhajiyaa godka geela oo gebi ahaanba, iyada oo aan la foorarsado, iyo, marka labaad, goobta bogga ee ku saabsan seedling waa in ay ahaadaan qoto dheer oo ah ugu yaraan 7 cm.
Dhirta lagu beeray waa in la waraabiyaa si buuxda illaa buuxda oo buuxa ciidda oo qoyaan leh. Kadib laba maalmood ka dib waraabinta waa in lagu celiyaa.
Video: muuqaalada dhirta
Khubarada ayaa ku talinaya in la doorto warshad lagu beerayo meel kale oo shubanku aysan horay u korin. Haddii aysan suurtagal ahayn, waa in dhulka si buuxda loo bedelo si qoto dheer ah ugu yaraan nus mitir. Marka laga beerto, waa suurad wacan in la isticmaalo digada fardaha beeraha sida bacriminta, taas oo aan ku nuugin nitrogen.
Haddii ciidda ay aad u iftiimiso, waxaa habboon in lagu daro dhoobo si ay u caawiso biyaha.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiso u leedahay akhrinta ku saabsan sida kor loogu qaado Rose ka soo bouquet ah, sida dhirta ubax in muddo ah, sida loo beeray geedo geedo ka soo sanduuq, iyo wixii qalad ku beeray qaladaad ugu badan marka koraan dhalashada.
Intaa waxaa dheer in la doorto meel aan cagaar ahayn si ay u baxaan, mid waa inuu sidoo kale u maleynayaa in shubanku ka mid yahay noocyada fuulitaanka iyo wuxuu gaari karaa dherer ilaa hal iyo laba ilaa laba mitir. Taasi waa, ay duurka u dheer iyo dheerba waxay kor u kaceen dabaysha waxayna ku xanuunsan karaan gustsada adag ee dabaysha. Sidaa daraadeed, waxaa badanaa loo doortaa meelo qayb ahaan ka ilaalisa dhirta laga bilaabo naqshadeynta iyo, marka lagu daro, waxay kuu oggolaaneysaa inaad xidhato laan dheer. Tani waxay noqon kartaa meel u dhow deyrka, veranda ama warebo.
Waxa kale oo muhiim ah in ubaxyadaasi aysan u dulqaadan daadin guga oo biyo leh oo dhadhan, oo doorbidaya in xilliga jiilaalka dhulka ku wareegsan lagu daboolo barafka. Sidaa darteed, mar kale, waa mid waxtar leh in ay ku beeri iyaga u dhow dhismayaasha, iyo sidoo kale meel u dhow Deedka.
Waxaan ku talinaynaa in aan wax akhrino ku saabsan faa'iidooyinka dheelka ah ee caafimaadka aadanaha, iyo sidoo kale sida loo qalajiyo xabaalaha iyo waxa la samayn karo iyaga.
Kala duwanaanshahan ingiriiska ee Ingiriisku, inkastoo xaqiiqda ah in dhulkeedu uu ku caano badan yahay roobka, ma aha mid aad u qallafsan oo ku saabsan qoyaanka ciidda. Sidaa darteed, warshad waa in la waraabiyaa kaliya marka lakabka sare ee carrada dhoobo saddex santiimitir qoto dheer.
Fiidnimadii ugu fiicnayd ee hoos u dhigta fasalka qaangaarka ah waxaad u baahan tahay inaad ku shubto ilaa 15 litir oo biyo ah. Dhirta dhallinyaradu waxay u baahan yihiin, siday u kala horreeyaan, tiro yar oo yar.
Daryeelidda noocyo kala duwan, taas oo ka kooban quudinta, laamaha gogosha iyo isku diyaarinta jiilaalka, ma aha mid aad u adag, laakiin weli waxay u baahan tahay u hoggaansanaanta xeerarka gaarka ah.
Sannad labaad ka dib markii Rose ah la beeray, waxay horay u baahan tahay bacarimiso ka Bacriminta. Qaliinka waxaa lagu fuliyaa dhowr marxaladood:
Marka hore, dhirta waxaa lagu buuxiyaa walxaha nitrogen-ku jira oo kicin kara caleemaha cusub.
Marka burooyinku ay bilaabaan inay horumariyaan baadiyaha, Bacriminta fosfateerka lagu daro Bacriminta nitrogen.
Iyadoo bilawga xilliga dayrta, dhirta waxaa loo wareejiyaa dhirta "cunto", taas oo u oggolaan doonta in ay ka badbaaddo qaboobaha qaboobaha iyada oo aan lumin.
Beerta bilowga ah waxay faa'iido u lahaan doontaa in la akhriyo sida loo bacrimiyo uhorow, maxay yihiin cudurrada ugu weyn ee qaboojinta iyo sida loola dhaqmo, maxay yihiin farqiga u dhexeeya xayawaanka iyo lafdhabarta, iyo sidoo kale sida loo doorto qalabka wax lagu daboolayo.
Qalliinka si looga saaro baadiyaha oo dhan xad-dhaaf ah waxaa lagu fuliyaa guga iyo dayrta. First of dhan, dhan oo la qalajiyey, khafiif ah oo khafiif ah, jilicsan iyo caleemaha cad oo aan shaki lahayn iyo laamaha waa la tirtiray. Ka dibna xeeldheerka habka kale ee loo dejiyay ayaa go'aaminaya. Xaaladda of rose "William Morris", oo ka mid ah noocyada fuulitaanka, caleemaha waxaa inta badan loo gaabin ilaa shanaad ee dhererka asalka ah.
Waa muhiim! Ka dib markii manjooyin, khabiiro kugula talinayaan in ay quudiyaan dhirta leh Bacriminta adag.
Inkastoo kororka "William Morris" loo tixgeliyo jiilaalka-adag oo aan ka baqan qabow -10 ° C, aagahayaga, oo aan marar dhif ah, laakiin mug weyn oo xoog leh ayaa dhacaya, warshadani waxay u baahan tahay diyaarin culus oo jiilaalka ah marka loo eego guriga.
Noocyada noocan ah ee qaboojinta sida Bonica, Pierre de Ronsard, Chopin ayaa sidoo kale iska leh caabbinta dhaxan.
Qabashada quudinta saxda ah iyo joogtada ah, abaabulidda ciidammada difaaca ee geedka, ayaa ah lafagurid diyaar u ah jiilaalka. Si kastaba ha noqotee, si ay kororka ugu noolaato dhaxan adag oo aan lahayn lumis, waxaa loo baahan yahay tallaabooyin wax ku ool ah.
Video: gooyaa iyo hoyga hoyga jiilaalka
Laakiin marka hore waa inaad siisaa dhirta si ay u dhameeyaan arrimaha xagaaga. Taasi waa, ubaxyada soo haray waa inay si madax-bannaan u dhammeeyaan ubaxyada lafdhabarta, dabadeedna dhulka ku dhacaan, oo aan qofna dooran. Tani waxay caawisaa caleemaha si ay u bislaadaan ugu badnaan.
Ka dibna baadiyaha waa in ay noqoto mid wanaagsan. Tan iyo markii uu kacay Rose waa fasal fuulid, laamihiisa, inkastoo loo soo gaabiyey shanaad ee dhererka ka dib markii manjooyin, weli weli muddo dheer.
Baro noocyada iyo shucuurada koritaanka Dutch, Canadian-ka iyo Ingiriisi sii kordhaya.
Waa in la dhigaa dhulka, lafaarta oo daboolay lakabka soddon sentimitir caleemaha, oo lagu daboolay qalab beerta aan duubneyn ama filimka sare. Guga, rinjin ayaa laga saari karaa marka heerkulku yahay qiyaastii 0 ° C.
Waa muhiim! Ilaa ay ka soo baxaan xasillooni xasilloon oo ka hooseysa 10-dhibcood, waa inaadan daboolin shaxda.
Kala duwanaansho-tufashada ayaa caan ku ah ciladaheeda oo dhan noocyada cudurada, oo ay ka mid yihiin inta badan saamaynaya noocan ah noocyadan xayawaanka budada iyo xayawaanka.
Ma taqaanaa? William Shakespeare ma aha mid aan kala go 'lahayn ubax. In uu ciyaaraha iyo sonnets, wuxuu ku muujinayaa kor u kacay in ka badan konton jeer. Iyo sidoo kale qoraaga weyn wuxuu sidoo kale ku xusan jawaabta liiska lafaha Ingiriisiga, noocyo kala duwan oo magaciisa ku dhajiya.
Farshaxanka Ingiriisiga ah iyo naqshadeeye William Morris, oo inta badan isticmaala sawirrada ubaxyada ubaxa marka la dhejinayo waraaqaha derbiga iyo naqshadda dhismaha, dhab ahaantii farxad weyn ayay ku noolaanaysaa sawirka geedka ee magaciisa ku leh. Laakiin maanta oo qudhiisu wuu reyreeyaa. Waayo, geedkan qurux badan oo caynkaas ah waxaa loogu yeeri karaa keliya nin sharaf leh.